परिवार नियोजन गर्दा आन्द्रा काटियो, अर्को शल्यक्रिया गरेर मात्रै अवस्था सामान्य रहने ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
परिवार नियोजन गर्दा आन्द्रा काटियो, अर्को शल्यक्रिया गरेर मात्रै अवस्था सामान्य रहने !
प्रकाशित मिति २ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०७:३७ लेखक नेपालीजनता
धरान । सप्तरीकी एक महिलाको परिवार नियोजनको शल्यक्रिया गर्दा सानो आन्द्रा काटिएको खुलेको छ।
राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा परिवार नियोजन गर्दा आन्द्रा काटिएकी सप्तरी विष्णुपुर गाउँपालिका–५ की २८ वर्षीया अनुकुमारी यादव तीन सातादेखि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराइरहेकी छन्।
परिवार नियोजनको शल्यक्रिया गरेर घर फर्केपछि अनुलाई खानेकुरा खाँदा बान्ता आउने, पेट फुल्ने समस्या भयो। सिकिस्त बिरामी भएपछि फागुन १२ गते पुनः उनलाई सगरमाथा अस्पताल भर्ना गरियो। तर, चिकित्सकले परिवार नियोजन गर्दा यस्तो समस्या आइरहने भन्दै थप उपचारका लागि प्रतिष्ठानमा रेफर गरिदिए। उनलाई फागुन १४ गते धरानस्थित प्रतिष्ठानमा भर्ना गरियो। प्रतिष्ठानमा अनुको भिडियो एक्स–रे गर्दा आन्द्रा काटिएको पत्ता लागेको हो।
राजविराजस्थित अस्पतालमा आन्द्रा काटिएकी अनुकुमारीको प्रतिष्ठानका चिकित्सक प्रा.डा. चन्द्रशेखर अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले फागुन २२ गते पुनः शल्यक्रिया गरेका छन्। अनुको पेटको ‘ल्याप्रोटोमी’ गरी प्वाल परेको आन्द्रा बाहिर निकालेर ‘आइलियोस्टोमी’ गरेका कारण उनी हाल खतरामुक्त रहेको चिकित्सकले जानकारी दिए।
अनुकुमारी गत फागुन ११ गते सगरमाथा अस्पतालमा परिवार नियोजन गर्न पति मोमेन्द्रका साथ भर्ना भएकी थिइन्। उनको परिवार नियोजनको शल्यक्रिया अस्पतालका डा. ब्रजेशकुमार झाले गरेका थिए। अनुको उपचारमा संलग्न प्रतिष्ठानका डा. राकेश गुप्ताले अनुको सानो आन्द्रा काटिएको र पेटभरि दिसा बगेर संक्रमण फैलिसकेको अवस्थामा पुनः शल्यक्रिया गरिएको बताए। ‘
अनुको आन्द्रा फुटेर पेटभरि संक्रमण फैलिसकेको थियो। बेलैमा शल्यक्रिया गरेकाले बिरामीको ज्यान बचाउन सफल भयौं’, डा. गुप्ताले भने, ‘अरू एक–दुई दिन ढिला भएको भए ज्यान जोखिममा पर्न सक्थ्यो।’
क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेका एक नेपालीको ज्यान गयो
काठामाडौं । क्यासिनोमा जुवा खेल्दा खेल्दै बेहोस भएको एक नेपालीको ज्यान गएको छ।
काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा रहेको…
सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवतीलाइ रहस्यमय तवरले गायब गरियाे, इन्स्पेक्टर थुनामा,डीएसपी तीलक भारतीसँग बयान
काठमाडौं । सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवतीलाइ रहस्यमय तवरले गायब गरिएको छ।
विमल घर्तीमगरसहित ५ खेलाडीलाई कारबाहीको तयारी
काठमाडौं । अनुशासन विपरित गतिविधि गरेको आरोपमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका ५ खेलाडीमाथि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले कारबाही अघि…
तपाईको यो साता कस्तो छ ? पुष २ गतेदेखि ८ गतेसम्मको तपाईको भाग्य जान्नुहोस्
मेषः– आइतबार र सोमबार फजुल खर्च बढ्नेछ । विश्वासमा अविश्वास थपिनेछ । जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला ।…
चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यता परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित
काठमाडाैं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबा६ जुन २०१८ मा संचालन गरिएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (CAP-I, CAP-II र CAP-III तहको परीक्षाको…